सुनील ग्रोवरको सार्वजनिक भएको संघर्षको कथा, ५०० कमाउथे प्रति महिना, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मुम्बई। चर्चित कमेडियन तथा बलिउड कलाकार सुनील ग्रोवर अहिले बलिउडमा स्थापित नाम हो। तर, यहाँसम्म आइपुग्न सुनीलले गरेको संघर्षको कथा निकै मार्किक छ। एउटा सामाजिक संजाल प्लेटफर्मसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो बारेका बाहिर नआएको कुरा सुनाएका छन्।
उनले भने–म अभियन गर्न र मानिसलाई हसाउन सुरुदेखि नै माहिर थिएँ। मलाइ अहिले पनि सम्झना छ, १२ कक्षामा म एउटा नाटकमा भाग दिएको थिएँ त्यो बेला प्रमुख अतिथिले मलाइ तिमीलृे यो प्रतिश्पर्धामा भाग लिनु गलत हुन्छ, किनभने अन्य सहभागीका लागि अन्या हुन्छ।’
उनले अगाडि भने–जब मैले थिएटरबाट मास्टर डिग्री लिएँ, तब काम गर्न मुम्बई आएँ। तर एक महिनासम्म रमाइलो गरिरहेँ। मैले आफ्नो बचत गरेको पैसाबाट शहरको बाहिरपट्टी एउटा घर किनेँ। त्यो बेला म प्रतिमहिना पाँच सय रुपैयाँ कमाउँथे।’
त्यो बेला उनलाई आफू चाँडै सफल हुने आत्मविश्वास थियो। जब उनलाई पहिलो टेलिभिजन शोमा काम गर्ने अवसर मिल्यो तब उनलाई थाहा भयो की कसैले उनलाई रिप्लेस गरिदिएछ। उनलाई के थाहा भयो ने आफूजस्ता संघर्ष गर्ने मुम्बईमा धेरै जना छन्। प्रत्येक घरमा सुपरस्टार छन्। त्यसपछि उनीसँग भएको सबै पैसा पनि सकियो। त्यसपछि उनी सडकमै आइपुगे।
त्यसपछि सुनीलले एउटा बैंकमा काम गर्न थाले। उनलाई निकै पछुतो भइरहेको थियो। उनले आफ्नो दैनिकी चलाउनलाई रेडियोमा भ्वाइस ओभर गर्न सुरु गरे। जब उनको आवाजलाई स्रोतले मन पराए, तब उनलाई रेडियोमा एउटा शो मिल्यो। त्यो शो यति भाइरल भयो की कार्यक्रम निर्माताले उक्त कार्यक्रम देशभर चलाउने निर्णय गरे।
त्यसपछि सुनीलले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। अहिले उनलाई पूरै भातर मात्रै नभएर विश्वका धेरै मानिसले चिन्छन्। उनले गुत्थी र डाक्टर मशहुर गुलाटी जस्ता निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यद्यपी सुनील र कपिल शर्माको जोडी टुटेपछि करोडौंको मन टुटेको छ। यी दुवैबीचको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका थिए।